Fanamafisana ny vehivavy sy ny fanaraha-maso fandraisana anjara amin'ny jono madinika ao Timor-Leste - Blue Ventures
Ny jono madinika dia ampahany manan-danja amin'ny fiveloman'ny olona maro ao Timor-Leste saingy kely dia kely ny angona azo entina mampahafantatra ny fitantanana maharitra an'io sehatra io. Na dia eo aza ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatry ny jono ao Timor-Leste, amin'ny maha-mpanjono sy amin'ny fikarakarana aorian'ny fijinjana, dia voafetra ihany ny fampidirana azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fitantanana ny jono, izay maneho ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy. Mba hanangonana angon-drakitra momba ny fanaraha-maso ny fisamborana, tambajotran'ny vondrona vehivavy fantatra amin'ny anarana hoe Grupu Monitorizasaun Peskas dia natsangana tamin'ny taona 2018 tamin'ny vondrom-piarahamonina dimy: Ilik-namu (Atauro), Fatumeta (Behau), ary Ma'abat (Manatuto), Beto Tasi ary Li' an-lidu, miaraka amin'ny fanohanan'ny Blue Ventures. Ny vondrona vehivavy rehetra dia manao fanaraha-maso ny jono mandray anjara amin'ny fanangonana ny angon-drakitra azo avy amin'ny jono, hampahafantarana ny fitantanana ny jono, hanome hery ny vehivavy ho mpanangona angona momba ny jono, ary hanome fahafahana hianatra ao anatin'ny fitantanana an-dranomasina. Ity tatitra ity dia manolotra ny voka-pikarohana momba ny asa fanjonoana sy ny firafitry ny jono avy amin'ny angon-drakitra nangonin'ny fandaharan'asa fanaraha-maso ao amin'ny vondrom-piarahamonina telo amin'ireo dimy. Ny tatitra ihany koa dia mikaroka ny andraikitry ny vondrona mpanara-maso eo amin'ny fitantanana ny jono mifototra amin'ny fiaraha-monina, mandinika ny mety ho fahafahana hampitombo ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy amin'ny fitantanana ny jono, ary maneho ny fihetsehan'ny hery sy ny fizotran'ny fiaraha-monina mandritra ny fampiharana ny programa. Hitanay ihany koa ireo faritra ilana fanombanana bebe kokoa momba ny programa ary manome soso-kevitra.
House, J., Martins, D., & Gough, C. (2021). Fanamafisana ny vehivavy sy ny fanaraha-maso andraisan'ny tsirairay anjara amin'ny fanjonoana vondrom-piarahamonina ao Timor-Leste. Timor-Leste, Blue Ventures. © Blue Ventures 2021. Ny zon'ny mpamorona amin'ity famoahana ity sy amin'ny lahatsoratra, angon-drakitra ary sary rehetra voarakitra ato, afa-tsy izay voalaza etsy ambony, dia an'ny Blue Ventures.